Yinkalakatha lomqeqeshi omusha weBhakabhaka | News24
Yinkalakatha lomqeqeshi omusha weBhakabhaka
IZINGWAZI ezindala zaseSoweto kwiPSL nezinye zezithandwa eMzansi i-Orlando Pirates isizoqeqeshwa yinkalakatha yomqeqeshi ohlonishwa kakhulu ngamagalelo akhe, uMuhsin Ertugral.
Lomqeqeshi akadingi ukwethulwa ngokusemthethweni ngoba wazakhela igama eminyakeni edlule kwiKaizer Chiefs, Ajax Cape Town kanye neMpumalanga Black Aces okade eyiqeqesha ngesizini edlule.
Noma kungathiwa abaphathi beBhakaBhaka baxake noma bathuse iningi labalandeli babo ngokuvele baqashe lomqeqeshi ngaphandle kokutshengisa ukuthi bebehlwaya omusha. Abazaziyo izinto nabakade balilandela ibhola leSea Robbers bazokwazi ukuthi umphathi walekilabhu u-Irvin “Iron Duke” Khoza akuyona indoda ethanda ukumpompoloza kakhulu ngomlomo kodwa uke abonakale esenza nje.
Inkalakatha endala neyake yadlala kwiKaizer Chiefs nePirates uMarks Maponyane uthi amaSea Robbers abambe ufishi omkhulu ku-Etrugral futhi imisebenzi emihle yakhe izobonakala.
UMaponyane uthandazela nje ukuthi lomqeqeshi ahlonishwe yibo bonke abasebenzela iPirates futhi bangagxambukeli emsebenzini wakhe.
“Lomqeqeshi ungomunye wabahlonishwa kakhulu eMzansi. Futhi engikuthanda ngaye ukuthi uwazi kahle uMzansi kanye nabadlali bawo.”
Nowayeyisitobha saMaBhakhaniya esasingazwile uGavin “Stability” Lane uthi uthandazela ukuthi lomqeqeshi avunyelwe ukusebenza ngomoya wesonto futhi enze ngokuthanda.
“Mina ngithi izinsuku ezimnandi manje sezizobuya kwiBhakaBhaka ngoba phela lomqeqeshi uzithandela ukusebenza kanzima, akancengi, futhi uthanda ukuwina izinkomishi. Uma ezoyekwa azenzele ngokwakhe futhi asebenze ngoxolo, uzoletha impumelelo eningi eqenjini.”
Lomqeqeshi omusha weBhakaBhaka uthe kuyintokozo nenselelo enkulu ukujoyina iqembu elikhulu neliyizithandwa zoMzansi wonke kanye nezinkunzi zaseSoweto.
“Ithuba leli elikhulu ngendlela eyisimanga empilweni yami, kodwa-ke mangisho ngithi mkhulu umsebenzi osangihlalele.”